Waa maxay waxa ugu fiican ee lagu guuleysto: shukaansiga ama lagu sasabto? | Ragga Stylish
Dhirbaaxo ama lagu sasabto
Paco Maria Garcia | | Lamaanaha iyo Galmada
Haddii aad tahay wiilka ugu qurux badan xafiiska, Hadaad jeceshahay gabdhahaas oo umuuqda kuwa aan laheli karin, shakigu wuxuu yahay inaad xodxodato ama lagu sasabo.
Way dhici kartaa inaad dareento inaad soo jiidanayso dhowr dumar ah, laakiin isla markaa ay kugu adag tahay inaad wada xiriirto kuwa adiga ku soo jiito.
1 Dareemayaasha markay tahay sasabashada
2 Ku shukaansi oo ku sasabi WhatsApp-ka
3 Qaar ka mid ah tilmaamaha lagu shukaansado ama lagu sasabo
Dareemayaasha markay tahay sasabashada
Markii ay gabadhaasi kaa dhigto mid aad u naxsan oo ay kugu adag tahay inaad dhahdo saddex erey oo isku xigta, waa inaadan ka walwalin. Dhab ahaan, waa la muujiyay taas Ragga celcelis ahaan waxay ku qaataan 15 daqiiqo inay ku abuuraan fariin jacayl ah.
Maxay tan noogu dhacaysaa? Ama walaaca ah in wax waliba si fiican u socdaan, isla xiisaha daqiiqadaas, iwm. Runtu waa taas waxaan dareemeynaa amaan aad uwanaagsan, aadna u faanno… Ilaa aan gabar aad u jecel nahay.
Ku shukaansi oo ku sasabi WhatsApp-ka
Teknoolojiyadda ayaa wax walba beddeleysay. Waa wax caadi ah maanta inaan ku guuleysano qofkaas aan si xamaasad leh u dooneyno iyada oo loo marayo Facebook ama WhatsApp,
Barnaamijyadan farriimaha degdegga ah ayaa noo oggolaanaya inaan la hadalno qofka kale wakhti kasta. Taas ka sokow, waxay ku habboon yihiin dadka xishoodka leh ama dadka is-dhexgalka leh. Qaar ka mid ah baaritaanada laga sameeyay Isbaanishka ayaa lagu soo gabagabeeyay in WhatsApp uu yahay midka la doorbido.
Qaar ka mid ah tilmaamaha lagu shukaansado ama lagu sasabo
Waxa ugu horeeya ayaa ah iska hubi in gabadha aad dooneysid inaad sasabato aysan laheyn lammaane. Maaha taasi inay tahay caqabad aan laga gudbi karin, laakiin haddii aad dhibaato la kulanto ... dhibaato ayaad la kulmi doontaa.
Sidee loo bilaabaa wada hadal? Waa inaad heshaa waqtiga saxda ah oo aad weydiisaa su'aal doorbideysa wada xiriirka.
Maxay yihiin danaha aad ka wadaagaan iyada? Tani waa xog leh karti badan. Haddii aad ogaan kartid mowduucyada ama xiisaha aad wadaagaan gabadhaas, waxaad awoodi doontaa inaad si fiican u wada xiriirto. Tallaabada xigta waxay noqon kartaa in la bilaabo waxqabad wadajir ah, oo ku saleysan dulucdaas.
Dhoolacadee, ha joojin dhoola cadeynta. Taasi waxay dhistaa kalsooni oo dhoolla caddayntu waa la is qaadsiiyaa. Haddii aad sidoo kale wada hadal qosol leh ama qosol leh wada hadalka ku dhex gasho, waad jabi doontaa barafka suuragalka ah weligeedba iyada.
Iska jir taabashada. Had iyo jeer ixtiraam, salaax fudud ama taabasho jilicsan oo gacanta ah, ku abuur taabasho aad u sarreeya oo isku xirnaan ah. Tan macnaheedu maahan inaad dhaqso badan u socoto oo aad dhaqso u sameyso. Waxaad abuuri kartaa sawir xun.
Ugu dambeyntiina, talada ugu fiican ee lagu go’aansado inaad shukaansato ama aad u oggolaato in lagu sasabto, waa inaad adigu naftaada noqotaa
Ilaha sawirka: Atresmedia / El Confidencial
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Dhirbaaxo ama lagu sasabto
Zara waxay ku duuban tahay dharka tifaftirka tifaftirka cusub
Maxaa la siinayaa Kirismaska ​​soo socda